Isitudiyo esithandekayo kunye nePanoramic View - I-Airbnb
Isitudiyo esithandekayo kunye nePanoramic View
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguJalil
I-Lovely Studio ene-Air Condition, ineendawo zokulala ezi-2, iisofa ezi-2, i-TV/SAT, i-Intanethi/i-WIFI, iKitchen ecocekileyo + umatshini wokuhlamba, i-microwave. Ifanitshala yeModerne, enembono entle kwicala ledolophu laseCasablanca. Isakhiwo esikhuselekileyo kunye neegadi.
Umbono oMkhulu kunye nendawo enkulu entliziyweni yeSixeko saseCasablanca, ihlaziywe ngokupheleleyo ngemibala yomxholo wePurple & White, umgangatho weplanga, igumbi lokulala elahlukileyo elineengcango ezivulekileyo, iindawo zokulala kunye neelinen ezisemgangathweni, iisofa ezimbini ze-3 ye-sofa, i-air conditioning, ene-satellite TV CanalSat, wifi, ikhitshi elinezixhobo zokuzilungiselela ukutya.
Ivenkile enkulu imizuzu emi-2 ukuhamba, ivenkile yecuba, ikhemesti kunye neDry ezantsi kwendawo yokuhlala.
Isakhiwo ngokuqinisekileyo sidala kodwa sikhuselekile ngokupheleleyo, kwaye imbali yaso kunye nokuzalwa kwakhona kuyaphawuleka.
Ukudluliselwa kwisikhululo seenqwelomoya kunokubonelelwa ngeqabane elikhwele ihashe kunye nesongezelelo.
4.81 out of 5 stars from 306 reviews
4.81 · Izimvo eziyi-306
Carrefour Market Romandie 2, indawo yokubhaka eCalidad, la maison Chez Paul, ubunewunewu baseMoroccan Artisana Fenyadi amanyathelo ambalwa ukusuka.
Ukutya okuninzi okutyiwayo, iiCafés zePizzerias kunye neendawo zokutyela ezilikhulu leemitha kude eBoulverad Bir Anzarane.
Umbuki zindwendwe ngu- Jalil
Izimvo eziyi-1 013
Ukutshekisha kwenziwa ixesha elininzi ngokuzimeleyo, unako ukufikelela kwizitshixo ukusuka kwibhokisi esecaleni komnyango wendlu, ikhowudi iya kwaziswa kuwe, kunokwenzeka ukuba ufike nanini na ixesha le-H24.